What do shifting grass-roots dynamics tell us about the Zimbabwe election? | Info Israel
WashingtonPost: What do shifting grass-roots dynamics tell us about the Zimbabwe election?
2018-08-30 (325 Days Old)Total Views: 86 | Last 7 Days: 5
13 Related Articles, between 2018-08-28 and 2018-08-26
A subdued Zimbabwe inaugurates Mnangagwa after disputed vote. A subdued Zimbabwe inaugurates Mnangagwa again after bitterly disputed election >>
A subdued Zimbabwe set for Mnangagwa's inauguration, again. A subdued Zimbabwe readies for Mnangagwa's inauguration after bitterly disputed election >>
A subdued Zimbabwe set for Mnangagwa’s inauguration, again. Zimbabweans have begun arriving at a national stadium for the inauguration of President Emmerson Mnangagwa after a bitterly disputed election. >>
Emmerson Mnangagwa sworn in as president of Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa was officially sworn in as president of Zimbabwe on Sunday after winning a bitterly-contested election which was the country's first since... >>
Emmerson Mnangagwa takes oath as Zimbabwe's president after bitterly disputed election. Emmerson Mnangagwa takes oath as Zimbabwe's president after bitterly disputed election >>
Mnangagwa heralds 'a new Zimbabwe' at second inauguration in nine months. Zimbabwe's military-backed President Emmerson Mnangagwa again took the oath of office on Sunday, amid opposition claims of vote-rigging in the July 30 election. >>
The Latest: Zimbabwe leader to launch inquiry into violence. The Latest on Zimbabwe's presidential election (all times local): 1:40 p.m. Zimbabwe's president after taking the oath of office says he will soon appoint a commission of inquiry to look into the "isolated and unfortunate" post-election violence in which six people were killed when the military dispersed opposition protesters in the capital. >>
The Latest: Zimbabwe's Mnangagwa takes oath of office. HARARE, Zimbabwe (AP) - The Latest on Zimbabwe's presidential election (all times local):11:45 a.m.Emmerson Mnangagwa has taken the oath as Zimbabwe's... >>
Zimbabwe election: Mnangagwa sworn in as dispute continues. His inauguration comes a day after his main rival rejected a court ruling upholding the result. >>
Zimbabwe's leader names ex-military commander as a VP. HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwe's president has re-appointed as one of his vice presidents a former military general who helped him take power.President... >>
Zimbabwe's leader names inquiry into post-election killings. Zimbabwe's president names inquiry into post-election military intervention; 6 were killed >>
Zimbabwe's leader names inquiry into post-election.... HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwe's president has set up a commission of inquiry into the killing of six people following military intervention in the capital... >>
Zimbabwe's Mnangagwa takes oath as president following.... HARARE, Aug 26 (Reuters) - Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa on Sunday took the oath of office before thousands of people following an election... >>